Valeria - Mumazuva Ano Ekupedzisira - Kuverengera kuHumambo
Valeria - Mumazuva Ano Ekupedzisira
Mukadzi Wedu kuenda	Valeria Copponi musi waZvita 1, 2021:
Mwanangu, haucharangariri here zvandakakubvunza pandakatanga kutaura newe? Ndinoda kukuyeuchidza nezvazvo, mwanasikana wangu: Ndinoda kutambura kwako kureva “Ndinoda mupiro we [zvinoreva] kutambura kwako.” Chiziviso chemushanduri. - nyika iri kuchinja uye vana vangu vanogona kutukwa kudai mumwe munhu ane mutsa akasandibatsira nokupa Mwanakomana wangu kutambura kwavo kuti vaponeswe hama nehanzvadzi dzavo dzisina simba uye vasingateereri Shoko raMwari zvikuru. Muna VaKorose 1:24 , St. Pauro anonyora kuti: “Zvino ndinofara mumatambudziko angu nokuda kwenyu, uye munyama yangu ndiri kuzadzisa kushayikwa kwokutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo kereke . . . The Catechism yeChechi yeKaturike inotsanangura, 'Muchinjikwa ndicho chibairo chakasiyana chaKristu, “murevereri mumwe chete pakati paMwari navanhu”. Asi nemhaka yokuti muhunhu hwake hwoumwari hwakava munhu akazvibatanidza amene munzira yakati kumunhu ari wose, “bviro yokuitwa vagoverani, nenzira inozivikanwa kuna Mwari, chakavanzika chepaseka” inopiwa kuvanhu vose. Anodana vadzidzi vake kuti “vatore muchinjikwa [wavo] vamutevere,” nokuti “Kristu akatitambudzikirawo, achitisiyira muenzaniso kuti [ti]tevere makwara ake.”’ ( n. 618)
Ndine urombo pamusoro pezvese zvauri kutambura, asi ndinokumbira kuti usandisiya: iwe uri mubatsiri mukuru kwandiri. Ndinokuda, saka enderera mberi munzira yawakatanga rwendo rwako makore mazhinji apfuura. Handikwanise kukuvimbisa kuti kubva nhasi hupenyu hwako huchashanduka uye kuti hauchazotamburi, asi ndinokuvimbisa kuti mukutambudzika, ndichava pedyo newe uye ndichakutsigira. Muchada mimwe mweya inondibatsira nemunamato, asi munoonawo kuti zvakaoma sei panguva dzino. Enderera mberi [uzhinji kubva pano kusvika panoperera meseji] akamira pedyo neni; nditsigire nemunamato wako Cenacles munguva dzino dzekupedzisira uye ndinokuvimbisa kuti hauzozvidembi.
Nhasi ndinokumbira kuti ugare pedyo neni: Ndini Amai vako - ungararama sei pasina rudo rwangu? Kubva zvino namata nekutsanya, ipa kutambudzika kwako kuti uponeswe vadikanwi vako nehama dzako dzose dzisingatendi. Ndinokudai zvikuru; Handifi ndakakurasa. Mumazuva ano ekupedzisira ndichanyanya kuva pedyo nemi. Ndichanamata kuna Wamasimba Ose kuti akupfupise kutambudzika kwako. Nguva dzichapera uye pakupedzisira tichafara pamwe chete murudo rwaMwari.
Nditendei kwandiri: Handingakusiyei mutsitsi dzaDhiyabhorosi. Ndinokuropafadzai uye ndicharamba ndichikudzivirirai mumuedzo.
kureva “Ndinoda mupiro we [zvinoreva] kutambura kwako.” Chiziviso chemushanduri.
Muna VaKorose 1:24 , St. Pauro anonyora kuti: “Zvino ndinofara mumatambudziko angu nokuda kwenyu, uye munyama yangu ndiri kuzadzisa kushayikwa kwokutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo kereke . . . The Catechism yeChechi yeKaturike inotsanangura, 'Muchinjikwa ndicho chibairo chakasiyana chaKristu, “murevereri mumwe chete pakati paMwari navanhu”. Asi nemhaka yokuti muhunhu hwake hwoumwari hwakava munhu akazvibatanidza amene munzira yakati kumunhu ari wose, “bviro yokuitwa vagoverani, nenzira inozivikanwa kuna Mwari, chakavanzika chepaseka” inopiwa kuvanhu vose. Anodana vadzidzi vake kuti “vatore muchinjikwa [wavo] vamutevere,” nokuti “Kristu akatitambudzikirawo, achitisiyira muenzaniso kuti [ti]tevere makwara ake.”’ ( n. 618)
← Gisella - Marwadzo angu ari…
Rugwaro - Kana Hudzvinyiriri Hunopera →